Tag: fungidziro » Martech Zone
China, Kukadzi 6, 2014 China, Kukadzi 6, 2014 Douglas Karr
Nguva Yokuverenga: 2 maminitsi Mazuva ese mashoma, ini nemwanasikana wangu tinopopotedzana pamusoro pekuti ndiani ane tambo yekuchaja. Ini ndinochiva tambo yangu uye anowanzo siya tambo yake mumota make. Kana nharembozha dzedu dzese dziri pasi kusvika kune imwechete manhamba ekuchaja muzana… chenjera! Nhare dzedu dzave chikamu chemunhu wedu. Ndiyo yedu inobatanidza tishu kune shamwari dzedu, yedu yazvino ndangariro rekodhi, shamwari yedu iyo inotiyeuchidza isu zvekuita zvinotevera, uye kunyange
Nguva Yokuverenga: <1 Mineti Ndinoziva kuti pane kumwe kudzokorora pano nezvimwe zvezvinyorwa zvandanga ndichigovana kwazviri ini ndinotenda vatengesi vanofanirwa kuisa pfungwa dzavo gore rino… Gore ra2014 - kushambadzira kwedhijitari kwasvika padanho nyowani uye kunoramba kuchidaro. Zvisinei, vamwe vatengesi vachiri kushamisika - “Ndezvipi zvinhu zviri kuzokanganisa kushambadzira kwangu gore rino uye
Zvakanaka uye Zvakanaka Kubvisa Kushambadzira muna 2013
Nguva Yokuverenga: 2 maminitsi Gore rino rakakusveta here? Zvakandiitira. Rakanga riri gore rakaoma sezvo ini ndakarasikirwa nababa vangu, hutano hwangu hwakatambura, uye bhizinesi raive nemikana yakashata - kusanganisira kupatsanura neshamwari huru uye wandaishanda naye. Imi vanhu verengai bhurogu yangu yeruzivo rwekushambadzira saka ini handidi kutarisa kune dzimwe nyaya (kunyangwe dzaive nemhedzisiro), ini ndoda kutaura ndakananga kuKushambadzira neKushambadzira Tekinoroji. Kushambadzira muna 2013
2010: Sefa, Gadzirisa, Gadzirisa
Mugovera, December 12, 2009 Chishanu, July 27, 2018 Douglas Karr
Nguva Yokuverenga: 3 maminitsi Tiri kukurirwa neruzivo kubva kune vezvenhau, kutsvaga uye yedu inbox. Mavhoriyamu anoramba achikwira. Ini handina kana pasi pemitemo zana mubhokisi rangu rekufambisa mameseji uye kunyevera zvakanaka. Karenda yangu inoenderana pakati peBlackberry yangu, iCal, Google Calendar uye Tungle. Ndine Google Voice yekugadzirisa mafoni, uye YouMail kubata yakananga mafoni kune yangu foni. Joe Hall anyora nhasi kuti kunetseka kwega uye kushandiswa kwedata rakasarudzika neGoogle kunogona
Page 1 pamusoro 2